Qaramada Midoobay oi war ka soo saartay shirkii Maanta ee Xalane | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qaramada Midoobay oi war ka soo saartay shirkii Maanta ee Xalane
Qaramada Midoobay ayaa War kasoo saartay shirkii hordhaca ahaa ee maanta ka dhacay teendhada Afisiyooni, kaasoo ay ka qeyb galeen qaar ka mid ah madaxda DF iyo dowlad goboleedyada.
Qoraal caawa ka soo baxay xafiiska QM ee Somalia ayaa lagu sheegay in shirka loo badeli doono wada-tashiyo aan rasmi aheyn oo sii socon doona maalmaha soo aadan.
“Qaramada Midoobay waxay ka war haysaa kulanka maanta ee horudhaca u ahaa Shirka la qorsheeyay inuu Muqdisho ku qabsoomo oo qayb ahaan ay goob joog ahaayeen Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka; waxay Qaramada Midoobay ku baaqaysaa kulamo aan rasmi ahayn oo dheeraad ah, si loo xajiijiyo kasoo qaybgakii loo baahnaa oo ah mid dhamaystiran, si is afagarad looga gaaro fulinta qaabka doorasho ee 17-kii September” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay QM.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa diiday inay ka qeyb galaan shir maanta magaalada Muqdisho uga furmay madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Beesha Caalamka oo ay ugu horreyso dowladda Mareykanka ayaa dhinacyada cadaadis ku saareysa in ay is hor fariistaan, heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan hannaanka doorashada waqtigeeda ka dib dhacday.
Previous articleBoqortooyada Sucuudi Carabiya oo imika ku calaacaleysa waxaan rabnaa Xabd joojin aan la galno Xuutiyiinta Yemen
Next articleXalka Soomaliya oo isugu soo arooray Laba Garab
Ciidamada Booliska Somaliland ayaa maanta tagay guriga ay ka shaqaynaysay Gabadh yar oo ay muuqaal hanjabaad ah ka duubtay haweenay ay u shaqaynaysay. War kasoo...
Haweenay nafteeda halis gashay kaddib markii lagu qalday askariyad dad ku...
Wasiir Amniga Puntland oo ka hadlay Dagalada Ciidamada Puntland la Galeen...
Cabsidii loo qaatay Nidaamka federaalka Aya qayb ka ahayd Waxa Maanta...